अखबार Archives - Halkara News
कोभिड–१९ विरुद्धको खोप परीक्षणका लागि चीन र रुसले मागे अनुमति, के गर्ला नेपाल ?
काठमाडौं । सरकारले विभिन्न देशमा कोभिड–१९ को विरुद्ध बनेका विभिन्न औषधि र खोपमाथि परीक्षण क्लिनिकल ट्रायल गर्न सम्भाव्यता छलफल शुरु गरेको छ। नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्ले रुस, चीन, भारत र बेलायतको अक्सफोर्ड विश्वविद्यालयले कोभिड–१९ विरुद्ध उत्पादन गरेका औषधि र खोपको प्रयोगबारे अनुसन्धानलाई अगाडि बढाएको हो। आ...
पुराना मोटरसाइकल र कारलाई उमेर अनुसार ‘बुढो कर’ !
काठमाडौं । कर कहाँ लाग्दैन? सायद यस्तो प्रश्नको जवाफ दिनै गाह्रो भइसकेको छ। अब पुराना दुईपाङ्ग्रे तथा चार पाङ्ग्रे निजी सवारी साधनमा पनि उमेर अनुसार कर लाग्ने भएको छ। १४ वर्षभन्दा पुराना मोटरसाइकल, स्कुटी र कार चढ्नेले अब वार्षिक थप ५ प्रतिशत ‘बुढो कर’ तिर्नुपर्ने भएको छ। यसअघि सार्वजनिक सवारीको मात्र निश्चित आयु तो...
यस्तो छ नेकपा विवाद सुझाव कार्यदलले दिएको मेलमिलापको खाका
काठमाडौं । नेकपा समस्या समाधान सुझाव कार्यदलले दुई अध्यक्षको अधिकार बाँडफाँटलाई ‘स्पष्ट’ पार्दै मेलमिलापको खाका तयार पारेको छ। कार्यदलको सुझाव यस्तो छ, प्रतिनिधिसभाको बाँकी कार्यकाल पनि अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकार सञ्चालन गर्ने। अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले एकता महाधिवेशनसम्म पार्टी सञ्चालन गर्ने...
प्रदेश २ मा कसरी फैलियो कोरोना ?
वीरगन्ज । प्रदेश २ का तीन ठूला सहर जनकपुर, वीरगन्ज र राजविराजमा कोरोना फैलिएपछि कहाँ कमजोरी भयो भन्ने पहिल्याउन प्रदेश सरकारले गत बोलाएको बैठकमा आरोप–प्रत्यारोप चल्यो। मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले सशस्त्र प्रहरीका डीआईजी कृष्णभक्त ब्रह्मचार्यलाई ‘पैसा लिएर नाकामा मानिस छिराएको’ आरोप लगाए । लगत्तै डीआईजी ब्रह्मचार्...
एसिड छाप्ने योजना बनाएका आलमले नै मोटरसाइकलमा बाफल लगेका थिए युवतीलाई
काठमाडौं । ओखलढुंगाकी युवतीलाई एसिड छ्यापेका दुई व्यक्तिलाई प्रहरीले दुई घण्टामै पक्राऊ गर्न सफल भएको छ। ओखलढुंगाकी २२ वर्षीया पवित्रा कार्कीलाई बिहीबार राति तेजाब (एसिड) छ्यापेर भागेका रौतहट लक्ष्मीपुरका मोहमद आलम र भारतका मुन्ना महमदलाई घटनाको २ घण्टामै प्रहरीले पक्राउ गरेको हो। डल्लुमा कवाडी पसल गरिरहेका आलमले...
मुद्धाको हदम्याद समय भदौ १ बाट लागू हुने
काठमाडौँ । कोरोना भाइरसविरुद्ध चैत ११ गतेदेखि लागू भएको बन्दाबन्दी औपचारिक रूपमा मङ्गलबार रातिदेखि अन्त्य भएको घोषणा गरिए पनि न्यायालयका मुद्दाको म्याद हदम्यादको समय भदौ १ गतेबाट नै सुरु हुने भएको छ। बन्दाबन्दी खुले पनि सेवाग्राही आवतजावतका लागि लामो दूरीका सवारीसाधन सञ्चालन नभएसम्मको अवधि अदालत खुलेको नमानिने सर्वो...
संखुवासभा पहिरोमा बेपत्ता भएका नभेटिएपछि फर्कियो उद्धार टोली
संखुवासभा । सिलिचोङ गाउँपालिका–१ बेसिन्दाको पहिरोमा हराइरहेकाहरुलाई ८ दिनसम्म पनि फेला पार्न नसकेपछि उद्धारमा संलग्न सुरक्षाकर्मी फर्किएका छन्। पहिरोमा पुरिएकाहरु फेला नपरेपछि उद्धारका लागि सदरमुकाम खाँदबारीबाट गएको ६० जनाको टोली फर्किएको हो। उद्धार टोली सोमबार सदरमुकाम खाँदबारी आइपुगेको छ। गएको असार २८ गते सिलिचोङ ...
श्रीमतीको अवैध सम्बन्ध भेटिएपछि हवल्दारले गरे आत्महत्या, श्रीमती र प्रेमीविरुद्ध मुद्दा दर्ता
धरान । जिल्ला अदालत सुनसरीका न्यायाधीश शंकर राईका अंगरक्षक प्रहरी हवल्दार ओम प्रकाश खतिवडाको आत्महत्याको घटनामा प्रहरीले उनकी श्रीमती र प्रेमीलाई दोषी ठहर्‍याएको छ। सुनसरी प्रहरीले हवल्दार खतिवडाले आत्महत्या गर्नुको कारण उनकी श्रीमती दीक्षा खतिवडा र उनका प्रेमी विशाल तामाङ रहेको भन्दै आत्महत्या दुरुत्साहनको मुद्दा द...
कोरोनाले रोकिएका सबै तहका परीक्षा दशैंअघि गराउने टियूको तयारी, यस्तो छ परीक्षा विधि
काठमाडौँ । त्रिभुवन विश्वविद्यालयले कोरोना भाइरस ९कोभिड–१९० को सङ्क्रमणका कारण स्थगित स्नातक तथा स्नातकोत्तर तहको परीक्षा असोजभित्र सञ्चालन गर्ने भएको छ। विद्यार्थीलाई भौतिक रूपमा उपस्थित गराउने तथा विकल्पका रूपमा अनलाइन विधिबाट परीक्षा सञ्चालन गर्नेगरी विश्वविद्यालयले परीक्षा लिने बाटो खोल्ने भएको हो। परीक्षा नि...
सहसचिव नै अख्तियारको फन्दामा, नक्कली जग्गाधनी बनाएर जग्गा बिक्री गरेको आरोप
काठमाडौं । नक्कली जग्गाधनी बनाई ३२ बिघा २ कट्ठा १७.२५ धुर जग्गा बिक्री वितरणमा गरेको अभियोगमा बहालवाला सहसचिवसहित १३ जना तानिएका छन्। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सहसचिव टीकाराम ज्ञवालीसहित १३ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो। नवलपरासीको प्रमुख मालपोत अधिकृत हुँदा भएको अनियमितताका कारण सहसचिव ज्ञव...